Sawiro Dad Ku Dhintay Rabshado Dib Kaga Soo Cusboonaaday Magaalada Nairobi – Bogga Calamada.com
Sawiro Dad Ku Dhintay Rabshado Dib Kaga Soo Cusboonaaday Magaalada Nairobi
November 18, 2017 6:34 am Views: 184
Wararka ka imaanaya magaalada Nairobi ee caasimada dalka Kenya waxey sheegayaan in gudaha magaaladaasi dib kaga soo cusboonaaday Rabshado iyo isku dhacyo xoogan kuwaasi oo u dhaxeeya taageerayaasha Mucaaradka iyo ciidamada dowlada Nasaarada Kenya.
Rabshadahan galinkii dambe ee shalay ka dhacay magaalada Nayroobi ayaa yimid kadib markii garoonka diyaaradaha Jomo Kenyatta uu kasoo dagay hogaamiyaha ugu weyn dhanka Mucaaradka gaalka lagu magacaabo Raila Odinga kaasi oo dibadda ku maqnaay.
Taageerayaasha Raila Odinga ayaa isugu soo baxay wadooyinka magaalada si ay usoo dhaweeyaan balse xaalada magaalada ayaa Rabshad isku badashay kadib markii ay isku dayeen ciidamada Booliska iney Sunta dadka ka ilmeysiiso iyo Biyo ku kala ceyriyaan dadka isku soo baxay.
Taageerayaasha Raila ayaa dhagaxaan ku weeraray ciidamada Booliska taasi oo sababtay in halkaasi uu ka dhaca iska hor,imaad sababay khasaara nafeet iyo mid hantiyadeed.
Ciidamada Booliska ayaa toogasho ku dilay labo ruux oo ka mid ah dadkii taageersanaay Raila Odinga ee wadooyinka isugu soo baxay waxeyna wararka qaar sheegayaan in dhimashadu ay intaasi ka badantahay.
Taageerayaasha Mucaaradka ayaa iyaguna waxey gubeen Saddex gaari oo labo ka mid ah ay tahay gaadiid Booliska,sidoo kale waxaa gabi ahaan istaagay inta badan dhaqdhaqaaqii dadka,gaadiidka iyo midka ganacsiga ee magaalada Nayroobi.
Rabshadahan ayaa kusoo aadaya xilli Maalinta Isniinta ee soo socota lagu wado in maxkamada dalka Kenya ay go,aan ka gaarto doorasha gaaleedkii ku celiska aheed ee dhawaan ka dhacday dalka Kenya taasi oo ay kal hore mucaaradka sheegeen iney qaadaceen ka qeyb galkeeda.
Halkan Hoose Ka Daawo Sawirada.